पेटिकोट लम्पटले प्रचण्ड विरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति माफीयोग्य नभएको भन्दै, गरे रविको व्यापक विरोध! - Nepal Talk
चैत्र २ गते, २०७५ मा प्रकाशित
काठमाडौं। टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लमिछानेको प्रचण्ड विरुद्ध अनेक आरोप लगाए पछि आलोचना यति बेला सर्वत्र भएको छ। एक कार्यक्रममा प्रचण्डको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनी माथि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता र आमजनता नै उर्रल्लिए रखनिएका हुन्।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले आफ्नो हत्या गर्ने षड्यन्त्र गरेको बताए पछि ‘प्रचण्डको बारेमा रवीले चर्चामा आउन गलत अभिव्यक्ति दिए पछि रवि लमिछानेको विरोध सतहमा देखिएको हो । योङ कम्युनिस्ट लिगले आयोजना गरेको सहिद तथा बेपत्ता परिवार अभिनन्दन कार्यक्रमलाई बिहीबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए मेरो कार्यालयका सचिव भएर बसेका विप्लवले मलाई नै एक नम्बरमा राखेर मार्नु पर्ने भनेर माइन्युट गर्नु भएको छ रे।
टिम पनि खटाउनुभएको छ भन्ने सरकारका तर्फबाट आज बिहान मलाई सूचना दिइयो,’ साथीहरूलाई मलाई मारेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बच्ने हो र रु भन्ने प्रश्न गरेको थिए । यस पछि टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई कारवाही गर्नु पर्ने माग फेरी एक पटक उठेको छ।
उनले टेलिभिजन कार्यक्रममा दिएको अभिब्यक्तिलाई लिएर यस्तो माग उठेको हो। न्युज २४ टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताका बारेमा गालीगलौजको भाषामा उत्रिए पछि कारवाहीको माग गरिएको हो।
उनले प्रचण्ड मारिएर पनि केही फरक पर्दैन भन्दै न्युज २४ मा कुर्लदैं गर्दा के रबि लामिछाने पनि त्यही मिसनका अभियन्ता होइनन् भनेर उनले आफुलाई कसरी स्पष्ट गर्छन् ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
नेता तथा कार्यकर्ताहरुले फेसबुकमा लेखेका छन् – ‘प्रचण्ड मारिएर केही फरक पर्दैन भन्दै न्युज २४ मा कुर्लदैं गर्दा के रबि लामिछाने पनि त्यही मिसनका अभियन्ता होइनन् भनेर उनले आफुलाई कसरी स्पष्ट गर्छन् ? उनको त्यो वाणी सुने पछि मलाई उनी पत्रकारिताको मर्म र धर्म भित्र भए जस्तो पटक्कै लागेन। यसलाई कार्वाहीको विषय वनाइयोस्। उनले पत्रकारिताको खोल ओडेर अरु कर्म वा कुकर्म नगरुन्।’ पत्रकारको बदनाम समेत लामिछानेले गरेका छन्।
पत्रकार रबि लामिछानेले प्रचण्डको गलत ब्याख्या गरेका छन्। प्रचण्ड मारिनु पर्छ भन्दै उनि सामाजिक सञ्जाल उत्रिएका छन्। उनले एक पत्रकारको नाममा गलत प्रचार गरेका छन् र उनि कसरी भए पत्रकार भए भन्ने प्रश्न आज तमाम् जन–मानसमा उठ्न थालेको छ। पत्रकारले के बोल्न, के नबोल्ने, के लेख्दा हुन्छ, के लेख्दा हुँदैन यो कुरा समेत रबि लामिछानेले हेका नराखि बोलेका थिए।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले प्रचण्डलाई नै एक नम्बरमा मार्नुपर्छ भनेर टिम खटाएको दस्ताबेज समेत भेटिनु दुस्खद भएको उनले बताएका थिए।
‘प्रचण्डलाई नै एक नम्बरमा मार्नुपर्छ भनेर टिम खटाउनु भएको छ रे,’ पेरिसडाँडामा गरेको सहिद तथा बेपत्ता परिवारजनलाई सम्मान कार्यक्रममा उनले भने, ‘मलाई मारेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बच्ने हो त?’
आफूलाई मार्न टिम खटाउनेहरूलाई देखेर दया लागेको उनले बताएका थिए। ‘ती साथीहरूलाई देख्दा दयामाया लागेको छ। सोच्नुस्, राम्रोसँग भनेको छु,’ दाहालले भनेका थिए। उनले यो बिषयलाई सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर पत्रकार रबि लामिछानेले यसको गलत प्रचार गरेका थिए ।
राज्य कानुन अनुसार अघि बढ्ने बताएका उनले जनयुद्धको योजनाकर्ता, नेतृत्वकर्ता र शान्ति प्रक्रियाको पनि नेतृत्वकर्ता भएकोले अन्तिम सम्म लडि राख्ने बताएका थिए। देशमा राजतन्त्र पनि नभएको र २०५२ सालको जस्तो परिस्थिति पनि नभएकोले विप्लवले सोचेजस्तो केही गर्न नसक्ने उनले बताएका थिए।
‘यो ०५२ साल होइन। देशमा राजतन्त्र छैन। हिजो सँगै लडेका साथीहरूको सरकार छ, अनि परिस्थिति हेर्नु पर्दैनरु,’ दाहालले भने, ‘अर्को प्रचण्ड बन्छु भनेर हिँडेका छन् सजिलो छैन। म प्रचण्ड बन्छु भनेर हिँडेकै होइन। जनताले प्रचण्ड बनाइ दिएका हुन्।’ उनले वास्तविक सत्य तथ्य कुरा भनेका थिए तर पत्रकारिता पेशा गर्दै अगाल्दै आएका पत्रकार रबि लामिछानेले यसको गलत अर्थ लगाएका हुन् ।
जनयुद्ध लडेका सहिद तथा बेपत्ताजन सहित नेताबाट देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएकोले त्यो परिवर्तनबाट अब पछि हट्न नसकिने उनले बताएका थिए। ‘महान् सहिद र बेपत्ताका परिवारजनका अगाडि बसेर म भन्छु परिस्थिति ०५२ सालजस्तो छैन। हाम्रै कारणले परिवर्तन आएको छ। यसलाई उल्ट्याउने भनेको निरंकुशता तिर लैजाने हो,’ उनले भने।
उनले सहिद तथा बेपत्ताजनका परिवारलाई आफूहरूको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार रहेकोले निराश नहुन आग्रह गरेका थिए। परिवर्तन ल्याउन साथ र सहयोग गर्नेलाई कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी कन्जुस्याइँ नगरी सहयोग गरिने उनले बताएका थिए।
सहिदलाई सम्मानका लागि जनयुद्धका पहिलो सहिद दिलबहादुर रम्तेल र झापा विद्रोहका सहिदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन आफू ती ठाउँ पुगेको उनले बताए। ठूलो पार्क बनाएर सहिदको नाम लेख्ने र ती स्मारक ऐतिहासिक बनाउन सके परिवारजनलाई पनि खुसी आउने उनले बताएका थिए।
‘ठूलो पार्क बनाएर सहिदका नाम लेख्न सकियो र ती स्मारक ऐतिहासिक ठाउँ बनाउन सकियो भने मात्रै नखुलेका मनहरू र कैयौं प्रश्न गुठिएका मन चंगा हुन्छन्,’ दाहालले भने, ‘सहिदले गरेका काम राम्रा रहेछन्, युगयुगसम्म पनि सम्मानित हुने रहेछन् भन्ने दिन आउँछ।’
यसरी प्रचण्डले गलत अर्थ नलगाइ देश शहिद परिवारलाई बताएको बिषयलाई रबीले गलत अर्थमा प्रचण्डको भाषणलाई एक टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत जनतालाई भ्रामक विषय प्रचार गरे पछि बिभिन्न नेता कार्यकर्ता तथा आम सर्वसाधरणले सामाजिक सञ्जालमा यसरी टिप्पणी गरेका छन्: